Ikhaya IZITOLO Zase-AFRAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseNigeria USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana I-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza indaba yomdlali webhola lezinyawo okuthiwa "I-SAMU“. Imidwebo ephelele kaSamuel Chukwueze Ubuntwana Bendaba, i-Biography, amaqiniso womndeni, abazali, impilo yakuqala neminye imicimbi ephawulekile kusukela lapho ayengumuntu AKEKHO kuye lapho eba CELEBRITY.
Ukuphila Kwasekuseni nokuvuka kukaSamuel Chukwueze. I-Twitter, Igoli, iGistmania ne-Autojosh.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngokushaya kwakhe kanye nokuzimisela kwakhe ngokuqondile. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu ye-Samuel Chukwueze's Biography ethakazelisa impela. Manje, ngaphandle kokuqhubeka kwesikhathi, ake siqale.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
Ukuqala, USamuel Chimerenka Chukwueze wazalwa ngosuku lwama-22 kuMeyi 1999 edolobheni lase-Umuahia e-Abia State, eNigeria. Ungowokuqala ezinganeni ezintathu azalelwa umama nobaba wakhe omncane owaziwayo.
Hlangana nomunye wabazali bakaSamuel Chukwueze. Ama-Credits Ama-Image: TheSun.
Isizwe saseNigeria sobuzwe base-Igbo esinemvelaphi yomndeni waseNtshonalanga Afrika sakhuliswa esimweni semindeni ephakathi nendawo endaweni yakhe yokuzalwa edolobheni laseMuahia lapho akhulela khona kanye nomfowabo omncane nodadewabo.
USamuel Chukwueze osemncane wakhulela edolobheni laseMuahia eNigeria. Ama-Credits Wezithombe: I-WorldAtlas ne-Twitter.
Ukukhula Umuahia, uChukwueze osemusha wayeneminyaka engu-5 kuphela ubudala lapho ethandana nebhola ngokubuka ingane yakhe engu-Idol Jay-Jay Okocha ukudlala nokubonisa amakhono we-stellar emidlalweni yethelevishini. Ngenkathi uChukwueze ekulo, wayefikelwa yimicabango ngokudlala eceleni kwesithixo sakhe namanye ama-greats ebhola ngokuzayo.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - I-Education ne-Career Buildup
Njengoba iminyaka ihamba, uChukwueze watshala imali edlala ibhola nsuku zonke, okuwumsebenzi azama ngawo wonke amandla ukuwufunda nokufunda eHulumeni College Umuahia nase-Evangel Secondary School. Lo mdlali osemncane owayengumakadebona ebholeni uzovuma ukuthi wazidela ngokungadeli e-altare lokudlala ibhola. Ngokusho kwakhe:
"Ngangiwumfundi omuhle, kepha uthando lwami lwebhola lwagcina selugxilile ngenkathi inzalo yami yokutadisha incipha."
Le ntuthuko ayihambanga kahle ngabazali nomalume kaChukwueze nabenze konke okusemandleni ukumenza wagxila esifundweni. Eqinisweni, bake bashisa amabhuzu kaChukwueze'S nezinsizakusebenza zokushayela ekhaya ukuthi zazizimbi kangakanani kodwa umfana omncane wayesezibophezele ngokungafanele ekudlaleni ibhola.
Amabhuzu ka-Burning Chukuweze abengasondele ngokwanele ukumvimbela ekudlaleni ibhola. Ama-Credits Wezithombe: I-Youtube ne-Twitter.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Noma ngabe abazali bakaChukwueze bangeseki yini ngokuzibandakanya kwakhe kwebhola, lo mfanyana wanamathela edlalela izikole ayecabanga ukuthi zingasheshisa ukufezeka kwephupho lakhe lokuba ngumdlali webhola lezinyawo. Ukhuluma ngezifundo, uChukwueze waqala ngokuqala neqembu le-future Hope U-8 & U-10 kudala ngaphambi kokuba abe ngumfundi esikoleni esiphakeme.
Umdidiyeli webhola owahamba wayoziqeqesha kafushane neNew Generation Academy ngokuhamba kwesikhathi wajoyina iDiamond Soccer Academy ngonyaka ka-2012 futhi wabunjwa waba ngumnqobi wokuncintisana. KwakuseDiamondi Academy okwenze uChukwueze waba yingxenye yeqembu lawo elihambele umqhudelwano we-Iber Cup yentsha yamaPutukezi ka-2013 lapho bawunqoba noChukwueze waba ngumgadli wegoli eliphezulu kakhulu kulo mncintiswano.
Umncintiswano wentsha we-Iber Cup wonyaka ka-2013 wanqotshwa yiqembu leDiam Academy ngoChukueze osafufusa njengowokushaya amagoli aphezulu kakhulu. Ama-Credits Ama-Image: I-Twitter ne-Goal.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Umlando Wendlela Yokudumisa
Ngemuva kweminyaka emibili, uChukwueze wafika endaweni eshintshayo ekufezekiseni izifiso zakhe zomsebenzi lapho ethola indawo eqenjini laseNigeria elathola indebe yomhlaba ka-2015 FIFA U17 eChile, umcimbi owawufaka nentsha efana U-Trent Alexander-Arnold, U-Eder Militao futhi I-Christian Pulisic. Ngemuva kwamaqhawe akhe endebe yomhlaba, uChukwueze waqala ukuheha izintshisekelo emaqenjini amaningi ase-Europe.
UChukwueze oneminyaka engu-16 wayeyingxenye yeqembu laseNigeria elanqoba indebe yomhlaba ka-2015 FIFA U17 eChile. Isikweletu Sezithombe: I-Twitter.
Uvakashele ukuthandwa kweSalzburg, PSG, Porto ngenkathi i-Arsenal isondele kakhulu ukumfaka ezinhlelweni zabo zobusha. Kodwa-ke, le nsizwa izibophezele eVillarreal ebinokusebenzelana okungcono kuyena nakwiDiamond football academy. Ukufika kwakhe eVillarreal, uChukwueze wachitha izinyanga elwa nezithiyo zolimi nokujwayela ukudla kwaseSpain kodwa akakaze avumele izinselelo ukuthi zimphazamise ekutheni angaphaphami esikwatini seqembu laseVillarreal's Juvenil A.
“Bengingazi ukuthi ngidliswa yini ngifika, eVillarreal. Inyama… Yayinegazi yonke indawo! Bekulwela nokuthi ngiqonde iSpanishi ngaphambi kokuthi ngiphuphe ukuyikhuluma. ”
Ukhumbula uChukwueze ngezinsuku zakhe zokuqala eVillarreal.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Kungekudala ngemuva kokuthi uChukwueze enze i-debut yakhe ephezulu e-Villarreal ngo-Ephreli 2018, waboniswa umdlalo weqembu lokuqala ngoSepthemba ngawo lowo nyaka futhi waqhubeka nokuzimisa njengomdlalazi osabisayo ngokuqeda kahle isikhathi waze wafaniswa nembali yebhola Arjen Robben.
USamuel Chukwueze waziwa ngokudansa nokuzimisela kwakhe ngokuqondile. Isikweletu Sezithombe: I-Pulse.
UChukwueze wagcina ukuthola impumelelo ngonyaka owalandela lapho eba yingxenye yeqembu laseNigeria elanqoba ithusi ku-2019 Africa Cup of Nations. UEFA sambhalisa njengomunye wabafundi abasha abangama-50 abazobukela emhlabeni webhola kuloyo nyaka. Abanye, njengoba besho, umlando.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Ukuqhubeka nempilo yothando lukaSamuel Chukwueze, owinile angashada ngesikhathi sokubhala le bio. Lokhu kungenxa yokuthi akazange abonwe ngunobuhle baseSpain noma baseNigeria ongabhekwa njengentombi yakhe.
USamuel Chukwueze osemncane, ophumelelayo futhi osebenza kanzima akashadanga ngesikhathi sokubhala le biography. Ama-Credits Wezithombe: I-LB ne-Autojosh.
Izizathu, kungani uChukwueze engenayo intombi eyaziwayo, azikwazi ukuxhunyaniswa neqiniso lokuthi unesipiliyoni sezinyanga ezimbalwa nje sokudlala ibhola lezindiza eziphezulu. Ngakho-ke, utshala isikhathi esiningi nomzamo wokuthatha umsebenzi wakhe osanda kufinyelela ezindaweni eziphakeme kakhulu.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Umndeni awubalulekile nje kuChukwueze, uyikho konke ku-winger. Sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni kaChukwueze kanye namarekhodi akhona wozalo lwakhe.
Mayelana nobaba nonina kaSamuel Chukwueze: Abazali bakaChukwueze abaziwa ngamagama abo ngesikhathi sokubhala le bio ngenkathi kungaziwa okuningi mayelana nezimpande zabo zomndeni ngamunye. Kodwa-ke, owina wathi lapho uyise eyisikhonzi sikaNkulunkulu ngenkathi umama wakhe esengumhlengikazi kusukela esemncane. Bobabili laba bazali ekuqaleni babemelene nemidlalo yebhola likaChukwueze kodwa babengenakho ukukhetha kunokumnika izibusiso zabo ngaphambi kokuhambela umqhudelwano wePortugal wentsha ye-Iber Cup ka-2013.
Umama nendodana yakhe yokuqala esithombeni esifudumele esikhuluma kakhulu ngobudlelwano babo bothando. Isikweletu Sezithombe: I-TheSun.
Mayelana nezingane zikaSamuel Chukwueze nezihlobo: UChukwueze ungowokuqala ezinganeni ezintathu azalelwa abazali bakhe. Unodadewabo omncane nomfowethu omncane owaziwa ngaye ngesikhathi sokubhala. Futhi awekho umlando wobukhokho bakhe ikakhulukazi obabogogo nomkhulu kanye noyise kanye nogogo wakhe. Ngokufanayo, omalume bakaChukwueze, abomalume kanye nabazala bakhe abaziwa kanti umshana wakhe kanye nomshana wakhe usazokhonjwa ngesikhathi sokubhala.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Kude ne-Chukwueze on-pitch penchant kubavikeli abesabisayo, unobuntu obufana nobunjengobesebuveza njengomuntu ophansi emhlabeni, osebenza kanzima, olungile futhi ohamba kalula. Okwenezelwa yisimo sikaChukwueze isimo sakhe sokungadaluli okuningi ngempilo yakhe yangasese neyomuntu siqu.
Umnqobi oqondiswa uphawu lwe-Aries Zodiac ufaka izinto eziningi ezidlulisa intshisekelo nokuzijabulisa kwakhe. Le misebenzi ifaka ukudlala imidlalo yevidiyo, ukulalela umculo kanye nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane.
Umculo ungukudla komphefumlo kaChukwueze. Ufanekiselwa lapha ejabulela umculo ngenkathi ehamba ngesikebhe. Isikweletu Sezithombe: Gistmania.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Ama-Lifestyle Facts
Ngokuphathelene nendlela uSamuel Chukwueze enza ngayo futhi ayisebenzise ngayo imali yakhe, inani lakhe lenani liyabuyekezwa ngaleso sikhathi sokubhala kepha unenani lentengo elingu- € 30 wezigidi futhi uhola kahle kakhulu emiholweni nasemholweni wokudlala eqenjini lokuqala laseVillarreal.
Ngakho-ke, i-winger iphila impilo kanokusho njengoba kuboniswa yindlela yakhe yokusebenzisa imali. Yize inani lefulethi noma indlu uChukwueze ahlala kuyo ingaziwa kuze kube manje, ukuqoqwa kwezimoto zakhe kuqhayisa ngeMazda MX-5 Miata Convertible ride engajwayelekile ayisebenzisayo ukuthola indlela ezungeze iSpain.
USamuel Chukwueze ecela ukudutshulwa emotweni yakhe iMazda MX-5 Miata Convertible. Isikweletu Sezithombe: Autojosh.
USamuel Chukwueze Ingane Yendaba Yobuntwana Ne-Untold Biography Facts - Amaqiniso angaziwa
Ukuqeda umlando wethu wobuntwana kaSamuel Chukwueze kanye ne-biography, nazi amaqiniso amancane noma awaziwa ngokungajwayelekile mayelana ne-winger.
Inkolo:USamuel Chukwueze wazalelwa emkhayeni wamaKristu futhi wakhuliswa ngokuhambisana nezinkolelo zokholo lobuKristu. Yize umuntu engahambisani nenkolo ngesikhathi kwenziwa izingxoxo, kukholakala ukuthi akayena umKristu ongeyena umdlandla.
Ama-tattoos: I-winger - ephakeme ngamamitha ama-5, ama-intshi ayi-8 - ayinabo ubuciko bomzimba ngesikhathi sokubhala le biography. Kodwa-ke, akukho ukuphika ukuthi kungenzeka athole ama-tattoos lapho azinikezela phakathi kwabadlali bebhola abahamba phambili emhlabeni.
Ubufakazi besithombe bokuthi uSamuel Chukwueze akanawo ama-tattoos okwamanje. Isikweletu Sezithombe: Gistmania.
Ukubhema nokuphuza: Abazali bakaSamuel Chukwueze bamenze wavela kulesi senzo sokuphuza nokubhema. Akakaze abanjwe ephuza noma ebhema kwikhamera. Uma kucatshangelwa ukuthi wavelaphi, kuyacaca ukuthi owokuwina ngeke ahlanganyele esenzweni esiyingozi esingabeka engcupheni umsebenzi wakhe.
QAPHELA QAPHELA: Ngiyabonga ukufunda yethu USamuel Chukwueze Izingane Zendaba Indaba Plus Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.